उनले फेसबुकमा राम्रो फोटो राखेर केटाहरु फसाउने रहेछिन ! चिन्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > उनले फेसबुकमा राम्रो फोटो राखेर केटाहरु फसाउने रहेछिन ! चिन्नुहोस्
admin October 1, 2020 जीवनशैली, रोचक	0
बर्दियाकी ३३ वर्षीया आशिककुमारी चौधरीले अर्कैको राम्रो फोटो राखेर नक्कली फेसबुक आईडी बनाइन् । राम्री केटीको फोटो देखेपछि नवलपरासीका युवा फेसबुकमा जोडिन आइपुगे । आशिककुमारी पनि के कम, गफ गर्न थालिन् । सामान्य चिनजानबाट शुरु भएको कुराकानी मायाप्रेमसम्म पुग्यो । च्याटमात्रै होइन, फोनमा कुरा हुन थाले । दुवै जनाले लामो कुराकानी गर्न थाले, भेटेर रोमान्स गर्नेसम्मको । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
आशिककुमारीले आफ्नो व्यापार, व्यवसाय राम्रो भएको गफ दिन्थिन् । आफ्नै गाडी भएको बताउँथिन् । उनले आफ्नो उमेर २२ वर्ष बताएकी थिइन् । जवान केटी, व्यापार व्यवसाय राम्रो भएको र गाडीसमेत भएको भनेपछि केटा त्यसै मोहित हुने भए नै । उनले भिडियो कल गर्ने प्रयास गर्न थाले ।
केटी भिडियो कलमा आइनन् । किनकि, उनी फेसबुकमा देखिएकी केटी थिइनन्, न त २२ वर्षकी नै थिइन् । उनी त दुई सन्तानकी आमा थिइन् । केटाले भेट्ने कुरा गर्थे । केटी टारिरहन्थिन् । अति नै कर गरेपछि केटीले अर्को गफ दिइन्, मेरो पोखरामा पनि घर छ । त्यहाँ जाने बेलामा बाटोमा भेटौंला र सँगै पोखरा जाऔंला ।
केटा त्यसै मख्ख परे । छिटो आउन भन्न थाले । भदौ २६ गते उनले घरबाट निस्केको जानकारी दिइन् । आफ्नै गाडीमा जाने क्रममा चन्द्रौटामा पुगेपछि अ पह’रणमा परेको बताइन् । केटा आत्तिए । केटीले प्रहरीलाई आफू अ’पह’रणमा परेको जानकारी गराइन् । कुरा बाँके प्रहरीमा मात्रै सीमित रहेन, प्रदेश हुँदै हेडक्वाटरसम्म पुग्यो । प्रहरीले रातभरि अ’प्रेसन चलायो ।
प्रदेशका डीआईजी र हेडक्वाटरका उच्च अधिकारीहरु राती अबेरसम्म जागाराम बसे, खोजतलासमा लागिरहे ।केटीको फोनको लोकेसन नेपालगन्ज नै देखाइरहेको थियो ।धेरै मेहनतपछि प्रहरीले केटीलाई नेपालगन्जको फुल्टेक्रामा फेला पा-यो । बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानाका अनुसार, आशिककुमारीले केटाले भेट्न कर गर्न थालेपछि आफूले नाटक गरेको बताएकी छन् ।
आशिककुमारीको फेसबुक आईडी आफ्नो थिएन, न त फोटो नै थियो । केटाले देख्दा नराम्रो भनेर झस्किने भएकाले उनले अ’पह’रणको नाटक गरेकी थिइन् । अ पह”रणको नाटक गरेर प्रहरीलाई दुःख दिएकाले प्रहरीले आशिककुमारीलाई कार’बाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिकात्मक तस्बिर (गुगलबाट)
३ लाख दिदा पनि दिएनन् कुखुराको भाले, जस्को सुरक्षा चितुवाले गर्छ
यी ३ राशिका महिलाहरूसँग घरजम गर्नुहाेस्, लक्ष्मी समान हुन्छन्